၂၀၂၁ နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးသဘောတူညီမှုကိုယခုရယူပါ။ (Expired) »အခမဲ့ DWG Viewer Online | GstarCAD ကြည့်ရှုသူ | DWG FastView
နေအိမ် »သတင်း»၂၀၂၁ နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးသဘောတူညီမှုကိုယခုပင်ကိုင်ပါ။ (Expired)
၂၀၂၁ နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးသဘောတူညီမှုကိုယခုပင်ကိုင်ပါ။ (Expired)
၂၀၂၁ နှစ်သစ်သို့ရောက်ခါနီးပြီ သင်တို့ရှိသမျှကိုနှစ်သစ်မင်္ဂလာ!
DWG FastView သည်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းလုံးရှိ Coronavirus (COVID-19) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်သည်။
ဝေးလံခေါင်ဖျားသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေနှင့်စီးပွားရေးနှောင့်ယှက်မှုများကိုလျှော့ချရန်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ဆက်နေရန်လိုအပ်ချက်ပိုမိုများပြားလာရန်လိုအပ်နေသောဖောက်သည်များအားပိုမိုကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့နိုင်ရန် DWG FastView ကကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ယာယီလျှော့စျေးကိုကြေငြာခဲ့သည်။
၀ က်ဘ်၊ ဝင်းဒိုးနှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက် DWG FastView ဖြင့်အသုံးပြုသူများသည် AutoCAD ကိုမည်သည့်ကိရိယာနှင့်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးလယ်ပြင်၌၊ နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ဖိုင်များဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲ။ ရေးဆွဲနိုင်သည်။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုလစဉ်ရောနှစ်စဉ်ပါ ၀ ယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးသဘောတူညီချက်ကိုသတိရသင့်သည်မှာမူလ $4.99 နှင့်ယခုပထမလအတွက် $2.99 နှင့် ၁TP2T47.99 မှနှစ်စဉ်လျှော့စျေး $27.99 သို့ဖြစ်သည်။
Windows, Chrome, Safari, Android & iOS အတွက် premium account တစ်ခုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ။ DWG FastView သည်အင်တာနက်ကိုတောင်မှအချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုပြင်ဆင်ရန်ကူညီသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောသုံးစွဲသူများသည် Google play သို့မဟုတ် Apple စတိုးတွင်ငွေပေးချေမှုပြတ်တောက်မှုများစွာကိုဖော်ပြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်ဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်စေ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းဖြစ်စေ၎င်းတို့သည်စနစ်တစ်ခုနှင့်ဖိုင်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ www.dwgfastview.comမီနူးရှိအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း link ကိုနှိပ်ပါ (သို့) တိုက်ရိုက်နှိပ်ပါ ဒီမှာ:
၂။ ထို့နောက် Buy ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်လျှော့စျေးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။
Buy Buy ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ (တုံ့ပြန်မှုမရှိပါကမကြာခဏမနှိပ်ပါနှင့်၊ စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပါ)
သင်၏ DWG FastView for Mobile ကိုဖွင့်ပါ၊ မည်သည့် iOS နှင့် Android ပင်မမျက်နှာပြင်တွင်မဆိုအရောင်းမြှင့်တင်မှုကိုသင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
၎င်းကိုထိပုတ်ပါ၊ အထက်ပါအဆင့်များအတိုင်းရှေ့သို့သွားပါ (နှိပ်ပြီးသောအခါသတိပြုပါ၊ ၎င်းသည်တင်ရန်ခဏကြာသည်)
2“ Best deal for 2021 New year, catch it now!(Expired)” သို့တုန့်ပြန်သည်
suroj sujakhu က
7:47 ညနေ မှာ ဒီဇင်ဘာ 24, 2020
Zeyne Ahmed က
5:06 ညနေ မှာ ဒီဇင်ဘာ 27, 2020
ဆယ့်ခြောက် - ၇ =